राप्रपा महामन्त्रीमा रेखा थापा पाराजित, कति मत आयो रेखाको ? - ramechhapkhabar.com
राप्रपा महामन्त्रीमा रेखा थापा पाराजित, कति मत आयो रेखाको ?
राप्रपाको महाधिवेशनमा निकै चासोका साथ हेरिएकी अभिनेत्री रेखा थापा महामन्त्रीमा पराजित भएकी छन् । उनी कुन्ती शाहीसँग पराजित भएकी हुन् । कुन्ती २००८ मत प्राप्त गर्दै महामन्त्रीमा विजयी भएकी छन् । रेखाले १६४० मत पाएकी छन् । राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा दुई जनाबीचको प्रतिस्पर्धालाई निकै रोचक तरिकाले हेरिएको थियो । कुन्ती कमल थापाको प्यानलबाट निर्वाचित भएकी हुन् ।
अध्यक्षमा विजय भएका राजेन्द्र लिङ्देनको पक्षबाट महामन्त्रीकी उम्मेदवार बनेकी रेखा ३६८ मतान्तरले पराजित भएकी हुन् । निर्वाचनअघि दुवैले एकअर्कामाथि व्यक्तिगत आक्षेप लगाउँदै आएका थिए । कुन्तीले राजनीति गर्न फिल्म खेल्न जस्तो सजिलो नभएको भन्दै चलचित्र क्षेत्रमै फर्किन सुझावसमेत दिएकी थिइन् ।
रेखाले पनि आफूले वैशाखमा अर्को चलचित्र निर्माण गर्न लागेको र त्यसमा आमाको भूमिका दिने भन्दै कुन्तीलाई जवाफ फर्काएकी थिइन् ।
काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजानतन्त्र पार्टी (राप्रपा)को पदाधिकारीमा कमल थापासँग प्यानल बनाएर चुनाव लडेका व्यक्तिहरु निर्वाचित भएका छन् ।अध्यक्षमा कमल थापा राजेन्द्र लिङदेनसँग दुई सय मतान्तरले हारे पनि अन्य पदाधिकारीमा भने महामन्त्रीबाहेक सबै थापा प्यानलका निर्वाचित भएका छन् । लिङ्देनको टिममा थापा प्यानलको वर्चश्व देखिएको छ ।
राप्रपा उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान र बुद्धिबहादुर तामाङ तथा महिला उपाध्यक्षमा रोशन कार्की निर्वाचित भएका छन् । यी सबै थापा समूहका हुन् । पाण्डेको हकमा भने दुबैले आफ्नो प्यानलको दाबी गर्दै आएका छन्।